Machar oo inuu tago Jubba shuruudo ku xiray - BBC News Somali
Machar oo inuu tago Jubba shuruudo ku xiray
Image caption Madaxweyne ku xigeenka la magacaabay ee South Sudan, ahna hogaamiyaha mucaaradka, Riek Machar.
Madaxweyne ku xigeenka la magacaabay ee South Sudan, ahna hogaamiyaha mucaaradka, Riek Machar, ayaa isagoo ku sugan magaalada Pagak, ee gobolka Upper Nile, waxa uu soo saaray shuruudo ay tahay in la fuliyo ka hor inta uusan qaban xilka maalinta Isniinta ah ee soo socota, sida markii horaba la qorsheeyay.
Riek Machar iyo kooxdiisa ayaa waxa ay ka doonayaan xukuumadda Madaxweyne Salva Kiir in ay xaqiijiso in Machar xilka loo dhaariyo marka uu gaaro magaalada, iyo sidoo kale in loo ogolaado in uu qabto isu soo bax uu uga hadlo heshiiska nabadda iyo fulintiisaba.
Sidoo kale shuruudaha waxaa ka mid ah in ammaankiisa la xaqiijiyo.
Haddaba xukuumadda Salva Kiir ma ka soo bixi doontaa shuruudahaasi?
Madaxweyne Kiir, oo haatan ku sugan waddanka Tanzania si uu dhiggiisa dalkaasi ula saxiixdo heshiis si rasmi ah dalkaasi ugu biirayo dalalka Bulshada Bariga Afrika ayaanan arrintaasi wax jawaab ah ka bixin.
South Sudan ayaa markii ay heshiiskaasi saxiixdo waxaa laga doonayaa in durbadiiba ay xuduudaheeda u furto badeecadaha iyo dadka ka tagaya dalalka kale ee xubnaha ka ah ururka.